Pluto: Complete Reconnaissance voalohany
Rehefa nanidina ny planeta madinika Pluto tamin'ny 14 jolay 2015, ny fanangonana sary sy rakitra momba ny planeta sy ny volana, dia nanomboka nisy ny fizarana tantara mahavariana momba ny fipoahan'ny planeta. Ny fiaramanidina tena izy dia nitranga ny marainan'ny 14 Jolay, ary ny famantarana avy ao New Horizons dia nilaza tamin'ny ekipany fa tonga soa aman-tsara teto an-tany tamin'ny 8:53 alina ny alina. Ny sary dia nilaza ny tantara fa efa niandry nandritra ny 25 taona ny olona.
Ny fakantsarin'ny kamiao dia nanambara fa tsy misy olona eran'izao tontolo izao mihandrona. Manana maranitra any amin'ny toerana sasany, lemaka misy any amin'ny hafa. Misy haza, toerana maizim-pito sy mazava, ary faritra izay hanadihady siantifika amin'ny antsipiriany hanazava. Mbola manamafy ny mpahay siansa ny fahatakarana ny trondro ara-tsiansa navoakany tany Pluto. Nandany 16 volana ny angon-drakitra rehetra mba hamerenana azy amin'ny tany; Ny tapany farany sy ny bitika dia tonga tamin'ny faran'ny Oktobra 2016.
Ireo mpahay siansa misionera dia nahita tontolo iray misy toerana miavaka miavaka. Pluto dia rakotry ny ranomandry izay mihamaizina any amin'ny faritra maro amin'ny alalan'ny fitaovana antsoina hoe "tholins". Izy ireo dia nohariana rehefa manjelanjelatra ny ices ny fahazavana ultraviolet avy amin'ny masoandro lavitra. Ny pluto dia toa miseho amin'ny ranomandry vaovao, mangatsiaka kokoa any amin'ny faritra mamirapiratra, miaraka amin'ny craters sy ireo tery lava mihazakazaka. Manana tendrombohitra sy seranan-tsambo koa i Pluto, ny sasany dia ambony noho ny hita tao amin'ny Rocky Mountains any Etazonia.
Toa hita fa manana karazana fehezam-pandrefesana i Pluto eo ambanin'ny elany, izay manasaraka ny ampahany amin'ny faritra ary mamakivaky tendrombohitra amin'ny alalan'ny hafa. Ny famaritana iray dia mampitaha ny efitranon'i Pluto ho an'ny jiro "lamaody lava cosmic".
Ny moron-dranon'i Charon, ilay volana lehibe indrindra ao Pluto, dia manana loko matevina miloko mena midorehitra, mety ho voafatotra amin'ny tholins izay nandositra tany Pluto ary napetraka tao.
Fantatry ny mpahay siansa ny fandehanana any anaty fiaramanidina fa manana rivotra i Pluto, ary ny fiaramanidina "nibanjina" tany Pluto taorian'ny nandehanany, nampiasa ny hazavan'ny masoandro namirapiratra nanerana ny atmosfera mba hizaha izany. Ireo angon-drakitra ireo dia manome fampahalalana marim-pototra momba ireo gaza samihafa ao amin'ny atmosfera, ary koa ny toetrany (izany hoe ny haavony) ary ny habetsan'ny entona tsirairay. Mijery ny ankamaroany amin'ny azôty izy ireo, izay manalavitra ny planeta amin'ny toerana ihany koa. Na izany aza, io toetr'andro io dia hisoloana ny fotoana, angamba avy amin'ny gaza mandositra ny faritra ambanin'ny haizina.
Nandinika lalina ny vanim-potoan'i Pluto ny misiona, anisan'izany i Charon sy ny loko marevaka ary ny polisy mainty. Ny angona avy amin'ny seranam-piaramanidina dia hanampy azy ireo hahatakatra hoe inona ireo singa mareva-doko eo amin'ny sehatra, ary nahoana no toa izao tontolo izao no mangatsiatsiaka amin'ny tsy fahampian'ny hetsika anaty ataon'i Pluto. Ny volana hafa dia kely kokoa, marefo, ary mifindra any amin'ny arabe feno Pluto sy Charon.
Ny angon-drakitra avy ao New Horizons dia tonga rehetra taorian'ny 16 volana nipoitra teo amin'ny elanelana lehibe teo amin'i Pluto sy ny Tany. Ny antony naharitra ela dia ny fampahalalana momba ny flyby tonga eto dia ny maro ireo angona tsy maintsy alefa.
Ny birao dia 1000 bits isaky ny segondra mihoatra ny 3 miliara kilaometatra.
Ireo angon-drakitra ireo dia nofaritana ho toy ny "trove" momba ny mombamomba ny kodiaran- tsarin'i Kuiper , faritra misy ny rafi-masoandro izay anitsakitsak'i Pluto. Misy fanontaniana marobe izay mbola ho valiana momba an'i Pluto, izay ahitana ny hoe "Taiza no namorona azy io?" "Raha tsy namorona ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao izy, ahoana no nahatongavany tany?" Ary "Taiza i Charon (volana lehibe indrindra) mivoaka ary inona no nahitako sabatra efatra hafa? "
Ny olona mihoatra ny 85 taona no nahalala an'i Pluto ho toy ny tara-pahazavana lavitra. Ny Horizôna vaovao dia nanambara izany ho toy ny tontolo mahavariana sy mavitrika ary mankamamy ny fanirian'ny olona rehetra! Heck, mety tsy misy planeta matavy intsony!
Ny tontolo manaraka dia eo amin'ny sehatra
Mbola betsaka ny zavatra hitranga, indrindra rehefa mamangy Tarika Kuiper iray hafa any New Horizons amin'ny fiandohan'ny 2019.
Ny zava-kendren'ny 2014 MU 69 dia eo amin'ny làlan-dàlana eny ivelan'ny masoandro. Hifindra amin'ny 1 Janoary 2019 izany. Mijanòna!
Ny momba ny Orionids Shower
Ny tantaran'ny tsunami maritiora
Space Telescope Hubble: Ao amin'ny Joba hatramin'ny 1990
Kintana sy gazy gasy amin'ny galaxy amin'ny tsunami sela
Fampahafantarana ny Black Holes
Inona no kintana ary hafiriana no iainany?
Ny tranga misy ny trotraka mainty hoditra
Ahoana no fiasan'ny menarana?
Herbert Hoover: Filoham-pirenena faha-telonjato faha-Etazonia
Gokouun o inorimasu - Fomba fiteny Japoney tsotra
Siansa tsara tarehy
Teny tokana amin'ny fiteny Anglisy
Ny hira Christmas Noel voalohany
Ady amin'ny College Cabrini
Ahoana ny fametrahana "Grossir" (hahazoana volo, ho lasa matavy)
Top 10 2Pac Visions taorian'ny nahafatesany
Nahoana ny mpamaham-bolongana no tsy afaka manamboatra ny asan'ny mpanao gazety matihanina?
Torolàlana fohy amin'ny mari-pahaizana
Fomba fanao mahafinaritra sy tantara
Ny fomba hahombiazana amin'ny Hockey
Oviana no mitovy ny fari-pahaizana standard?
Ahoana no hanohanana ny fomba fijery 2
Ny Venus Gemini Lehilahy
Mampiasa ny 'Grande'
7 fampidiran-dresaka izay mety hikirakiran'ny mpitandro ny filaminana mivezivezy any Etazonia
Here's How to Restore a Vespa